ခေတ်ဟောင်းမှ ခေတ်သစ်သို့ပြောင်းလဲလာသလို Range Rover မျိုးဆက်တွေဟာဆိုရင်လည်း ခေတ်နှင့်အညီ အသစ်အသစ်တွေ ထွက်ရှိလျက်ရှိပါတယ်။ ဒါဆို Range Rover ရဲ့ နောက်ဆုံးမျိုးဆက်က ဘယ်လိုထူးခြားချက်တွေပါရှိမှာလဲ..?
၂ဝ၁၈ ခုနှစ်အတွက် Range Rover မှ မော်ဒယ်အသစ် Range Rover Velar 2018 ကို ထွက်ရှိထားပါတယ်။ အရင် ထွက်ရှိထားတဲ့ Range Rover Evoque တွေထက် တန်ဖိုးမြင့်မားမှုမရှိသလို Range Rover Sport ထက် တန်ဖိုးနည်းခြင်းလဲ မရှိပါဘူး။ ဆိုလိုတာက Range Rover Evoque နဲ့ Range Rover Sport အကြားမှာ ရှိနေတဲ့ အနေအထားပါ။ ဒါ့အပြင် ယခုထွက်ရှိထားတဲ့ Range Rover မျိုးဆက်တွေထက် ပြောင်မြောက်လွန်းလှတဲ့ နည်းပညာတွေအပြင် နေရာမရွေး လွယ်ကူစွာမောင်းနှင်နိုင်မယ့်4wheel drive ဖြစ်တာကြောင့် လမ်းကြမ်းခရီးတွေအတွက် သာယာပျောမွေ့စေမယ့် အခြေအနေ တစ်ရပ်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။
Range Rover Velar 2018 ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေထဲမှာ နာမည်ကြီး ကားမင်းသားတွေဖြစ်တဲ့ BMW X4, Mercedes GLC Coupe နဲ့ Porsche Macan တို့ကပါဝင်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဓိက ဇာတ်ကောင်တွေထဲမှာ တော့ Merceses-Benz GLE Coupe နဲ့ BMW X6 တို့ က Range Rover Velar နဲကအပြိုင် ရပ်တည်နေပါတယ်။ သို့ပေမဲ့ SUV ချစ်သူတွေအကြားမှာ ဒွိဟ အဖြစ်တည်ရှိနေဆဲပါဘဲ။
Range Rover Velar ရဲ့ ရုပ်ထွက် အနေအထားကို လေ့လာကြည့်ရင် သမားရိုးကျ ထွက်ရှိထားတဲ့ Range Rover Sport တွေထက် တူညီနေမှာ မဟုတ်တဲ့အပြင် တစ်မှုထူးခြားတဲ့ ဒီဇိုင်းကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာပါ....
ဘယ်နေရာသွားသွား လူတိုင်းရဲ့ အာရုံစူးစိုက်မှုက Range Rover Velar ဆီကို ရောက်ရှိနေမယ့် အနေအထား..
Range Rover ရဲ့ ကမ္ဘာကျော် ဂုဏ်ပုဒ်တွေဖြစ်တဲ့ အကြမ်းခံမှုတွေ၊ ရေတောထဲဖြတ်မောင်းနိုင်မှုတွေက တော့မလွဲမသွေ ပါရှိထားပြီးသားပါ.....
လှပကျော့ရှင်းလွန်းတဲ့ အနောက်ပိုင်းဒီဇိုင်းက ခေတ်မှီ တဲ့အသွင်ဆောင်ထားတယ်....
ရိုးရှင်းလှပ လွန်းတဲ့ အတွင်းခန်းအပြင်အဆင်....
Steering အနေအထားနဲ့ ၁ဝ လက်မအရွယ် touch screen လေးက ခေတ်နှင့်အပြိုင် ရင်ပေါင်တန်းနိုင်မှုကို ခံစားသိရှိစေနိုင်မှာပါ.....
Range Rover Velar 2018 ရဲ့အင်ဂျင်တည်ဆောက်ထားပုံက ကာဗွန် ထုတ်လုပ်မှု လျော့ကျစေရန် ရည်ရွယ်ပြီး နည်းပညာအသစ်တွေ အများအပြားပါရှိထားပါတယ်။ Twin-turbo ,turbocharged, Spercharged (V6) အင်ဂျင် အမျိုးအစားကို အချိုးကျ တပ်ဆင်ထားပြီး ဂီယာနှင့်ဟန်ချက်ညီညီ လိုက်ပါစွမ်းဆောင်ပေးနိုင်မှာပါ..
ကားသော့လက်မှာကိုင်ထားတဲ့ ခေတ်ကိုကျော်လွန်နေပါပြီ။ Range Rover Velar မှာ Smart key function ကို လက်ကောက် ဝတ်အဖြစ်တပ်ဆင် အသုံးပြုနိုင်တဲ့အပြင် Apple Watch နှင့် တိုက်ရိုက်အသုံးပြုနိုင်အောင် ဒီဇိုင်းထည့်သွင်းထားပါတယ်....
ပိုမိုထူးခြားချက်ကတော့ 550 မီတာ အကွာအဝေးထိ ရောက်ရှိ ထွန်းလင်းနိုင်တဲ့ laser headlight တွေ ပါရှိလာတာပါဘဲ....
ကမ္ဘာကျော် Pop ဂီတ အဆိုတော် Ellie Goulding ကိုယ်တိုင် Range Rover Velar ရဲ့ ဒီဇိုင်းအပြင်ပိုင်းကို ကြွေနေတဲ့ အနေအထားမှာ ရှိနေပါတယ်...
ဒီလိုခန့်ညားမှုတွေပါဝင်လာတဲ့ Range Rover Velar ကြီးက Merceses-Benz GLE Coupe နဲ့ BMW X6 တို့ကို ဖြတ်ကျော်နိုင်မှာလား.....
ယခုနှစ် လိုင်စင် သက်တမ်းတိုးခြင်းကို နှစ်ကုန်အထိသာ ခွင့်ပြုတော့မည်